Mgbidi mgbidi (desktọọpụ) nkuanya
Igwe ọkụ na-enyocha ọkụ ọkụ
Igwe ọkụ anya ọkụ ọkụ eletrik
Antifrizi anya washer (lie)
Antifrizi anya washer (pedal ụdị)
Onyinye anya anya
Full akpaka anya washer
Washlọ anya anya
Obere anya washer
Ego elu anya
Ebe ịsa anya
Nhazi nke nku anya
Ihe ịga nke ọma
Igwe ihe anya laabu
site ha na 21-01-23
Ma n'ụlọ akwụkwọ ma ọ bụ n'ụlọ ọgwụ, achọrọ ụlọ nyocha, yana nsogbu nchekwa dị mkpa na nchegbu ka ukwuu. Ihe mgbochi mberede dị mkpa karịsịa mgbe kemịkal na-agbasasị na ahụ mmadụ ma ọ bụ anya na-akpachaghị anya. Nchọgharị ụlọ nyocha bụkwa ngwa ọrụ nchekwa dị mkpa. Ebe ọ bụ ihe im ...
Ọrụ nke ihe nhichapụ ngwa ngwa anya
Imirikiti ndị mmadụ nwere ike ịma ihe gbasara akwa anya, mana ha amachaghị banyere ha. Ngwa eji eme ka anya dị ka ụdị nchekwa nchekwa, ụdị dị iche iche, enwere ike iji ya rụọ ọrụ n'ọtụtụ ebe, ndị na-emepụta ihe eji asacha anya anya na-akọwa n'ụzọ zuru ezu ọrụ nke mberede ịsa ey ...
Mattersfọdụ ihe chọrọ nlebara anya nke ụdị ihe nhicha anya
E nwere ọtụtụ ụdị nku anya. Ndị na-emepụta ihe na-ahọrọ akwa anya nke kwesịrị maka ụlọ ọrụ nke aka ha dịka ọnọdụ na mkpa ha si dị. N'ihi ụdị anya anya dị iche iche, ụfọdụ ịdọ aka na ntị abụghị otu na usoro ojiji. Taa, anyị ga-ewebata matte ...
Oge dabara adaba na njirimara arụmọrụ nke Bohua anya
Bohua anya na-eme ka ntutu dị anya dị iche iche na-arụ ọrụ nke ọma, na-enye nchebe kacha mma. Ejiri ogo na Angle nke nkuanya anya dịka akụkụ nke ihu, mmiri dịkwa n'ụdị aerosol ma jiri nwayọ gbaa gburugburu. Iji mee ka ị jiri ya mee ihe n'ụzọ ziri ezi, Bo Hua Xiaobia ...
Ihe omuma banyere idozi anya
Shanghai Bohua bụ onye na-emepụta nku anya, ọkachamara na R & D, nhazi, mmepụta na ire nke eyewash, nwere edemede bara ụba na akụrụngwa dị elu. Bohua na-asacha ngwaọrụ anya, ịsacha anya nke ọma, na-enye nchebe kachasị mma ma na-ezere mmerụ ahụ nke abụọ. Ogologo na nkuku nke anya ...
Shanghai Bohua nche akụrụngwa Co., Ltd. emi odude ke Nke 359, Yinxi Road, Shanghai Songjiang elu tech Industrial Park, nso Shanghai
Shanghai Bohua nche akụrụngwa Co., Ltd.